Ngwa - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
CFB ngwaahịa ngwa
na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-ngwa nke CFB biarin
N'ihi na Nchikota ihe Njirimara na arụmọrụ, CFB ngwaahịa e ndị ọzọ ọtụtụ ebe-eji na-akwalite karịa nkịtị onwe-atụ n'ígwè biarin. Thin-walled Ọdịdị, obere size, ìhè arọ, mfe iji EU aka uwe. Dabere na ihe onwunwe Njirimara nke wear na-eguzogide oyi akwa nke PTFE ngwakọta CF ngwaahịa maka siri mmezi enweghị ike refueled ma ọ bụ esi ike gbanye mmanu, ọ dịghị mmanụ lubrication na obere mmanụ lubrication idaha. N'oge ojiji, PTFE ngwakọta Nleta a nyefe film na echebe grindstone aro site atarịta ibe ha arụ. PTFE blends enye magburu onwe wear-eguzogide ma na ala ọnụọgụ nke esemokwu, nakwa dị ka agafeghị oke elasto-plasticity, nke ekesa nchegbu gafee a dum kọntaktị elu ma si otú enwekwu ibu na-ebu ike nke EU na ngwaahịa (ịhụ). Ya mere, EU ngwaahịa na-adabara n'usoro, ịkụ, axial eji na n'oge ndị ọzọ.
na akpaaka ụlọ ọrụ
Ahụkarị ngwa ọrụ a na-agụnye:
trotul, breeki, ipigide pedal, mirror ukpụhọde usoro, wiper, window inwego usoro, elu mkpuciị anwụ usoro, joystick, ụzọ mgbabere uzo ụzọ mkpọchi, oche belt tensioning usoro, oche ukpụhọde usoro, Carburetor, ogwe, na-adabere, kwụ nkpa-n'aka na bọl isi, trotul, n'iru, n'iru, odo ígwè na na.
Agricultural ígwè na nri ígwè
Traktọ, ikpokọta-ewe ihe ubi, balers (hay, ahịhịa, wdg); balers, anụ nhazi akụrụngwa, poteto-ewe ihe ubi, sprayers, ọka dryers, akuku osisi, brewing ngwá, wdg
Construction ígwè, iga ígwè
Hydraulic egwupụta, haịdrọlik lifts, ihe agwa, ndụdụ inwego gwongworo, haịdrọlik cylinders, belt tensioners, cranes, ngwa agha gwongworo, pallet forklifts, pneumatic lifts, bulldozers, escalators, Liquid infusion ngwá, n'akụkụ loading na ebutu ígwè ọrụ.
Ezinụlọ ngwa, azụmahịa ngwa, ụlọ ọgwụ na ngwá
Air conditioners, injin ọka, dishwashers, ígwè ịkwa ákwà, ịsa igwe, friji, photocopiers, na-ebi akwụkwọ, scanners, mail nhazi usoro, akwụkwọ ozi sorting ngwaọrụ, eze ngwá, X-ray akụrụngwa, ọrụ tebụl na dị ka.
Hydraulic ụlọ ọrụ
Ịnyịnya ígwè, ọgba tum tum, ngwaọrụ, uzuoku Yarn Machine, reciprocating hụrụ, Gerong igwe, akwa igwe, ala na-akpa igwe, button igwe, nkwakọ usoro, n'ịkụgide ígwè ngwá, iko n'ichepụta ngwá.
CFB uwe a na-emekarị na-atụ aro maka intermittent ime ihe na ókè lubrication gburugburu ebe obibi, karịsịa mụụrụ oghere uwe imewe, mma maka bụghị na-aga n'ihu ma ọ bụ ugboro ugboro refueling oge, ma na ndị na-abụghị n'ígwè ọnọdụ, CFB Ogologo nke aka uwe na-adabere na-amị, n'elu ọsọ , kpọmkwem ihere okpomọkụ na ndị ọzọ na mmekọrịta. N'otu oge ahụ, n'ime elu nke aka uwe plastic oyi akwa nwere ike ekpe na ịkpụzi usoro tupu akpụ, e nwere ike esichara n'ime oche onu ka a mma nzukọ size.
Gear nfuli, nfuli, pistin nfuli, bọl valves, urukurubụba valves, agwakọta valves, akara valves, reciprocating ikuku Compressor, haịdrọlik brek, centrifugal compressors, haịdrọlik cylinders.